NgoFebhuwari 11, 2019 - Ellicott Dredges
Blog, I-Ellicott Dredges In Action
Kusukela izinkampani zaqala, i-Ellicott Dredges ibe namathuba amaningana ahlukile wokwakha ama-dredges enziwe ngokwezifiso amakhasimende ethu abhekwa njengalele kobuso bendabuko. Ividiyo yenkampani yethu yakamuva, “Ellicott's Major Projects Group,” kugcizelela ukuzibophezela kuka-Ellicott ekwakheni isibambiso esinokwethenjelwa esindayo. Ngaphezu kwalokho, ababukeli bazoba nethuba lokubona iqembu lethu lisebenza njengoba lisebenza ngokubambisana ukukhiqiza isikhunta esidlule okulindelwe yikhasimende lethu. Ukuthenga i-dredge kungaba nzima kwabanye abantu. Njengenkampani, siyaziqhenya ngokusiza amakhasimende ethu ukuthi athole ukutholwa okulungile. Ithimba lethu lisebenza ngqo nekhasimende ukuwasiza ...